सोमबार १३ मङ्सिर, २०७८
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » नेपालमा भूकम्पको धक्का
आईतबार ३१ असोज, २०७८
काठमाडौं । नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । गोरखामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो । गोरखाको मानबु आसपास केन्द्रविन्दु भएर आज बिहान ४ बजेर ९ मिनेटमा परकम्प गएको हो ।
४ दशमलव ३ म्याग्निच्युटको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । यो २०७२ सालको भूकम्पकै परकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालमा गएका भूकम्पहरूको विवरण
अन्य शास्त्रमा जस्तो औसत निकाल्न मिल्ने भए करिब आठ सय वर्षको यो विवरण हेरेर हामी हरेक १६ वर्षमा एउटा भूकम्प जानसक्छ भन्न सक्थ्यौँ। तर इतिहासमा न यस्तो औसत निकाल्न मिल्छ न त त्यसो गर्नु वैज्ञानिक नै हुन्छ।
यसरी औसत निकाल्न किन पनि मिल्दैन भने कुनैकुनै साल एकै वर्षमा धेरैपटक भूकम्प पनि गएका छन्। यसले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको कुरालाई भने स्पष्ट पार्छ।
इतिहासका यी विवरणहरूको विश्लेषण गरेर भूकम्पविद्याविद्हरूले आफ्नै ढङ्गले वैज्ञानिक विश्लेषण पनि गर्न सक्लान्। नेपालमा अभिलेख राख्ने राम्रो परम्परा नभएकोले यस्ता भूकम्प यी भन्दा धेरै नै बढी गए होलान् भनी अनुमान गर्न सकिन्छ।
भूकम्पको इतिहासको जे जति खोजी भयो त्यो पनि एकाध मानिसको व्यक्तिगत प्रयासमा भएकोले यो निकै अपूर्ण छ। भूकम्पको बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तर्फबाट प्रशस्त खर्च भइरहेको छ। भूकम्पको इतिहासको खोजीमा योग्य व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेको खण्डमा अझ बढी प्रकाश पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ।
ट्विटरका मालिक ज्याक डोर्सीले नै छोडे ट्विटर, को हुन् नयाँ सीईओ ?
पुनःअध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने थापाको घोषणा
अधिवेशनस्थलमा झडप हुँदा मतदान अधिकृतसहित पाँच जना घाइते
बोलेरो जिप दुर्घटना : मृतक संख्या चार पुग्यो
एमाले निर्वाचन तालिका पुन सर्यो, उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम
एड्सबाट डरलाग्दो ओमिक्रोन भेरियन्ट : दक्षिण अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
एमाले महिला सदस्यमा ५३ जना नै निर्विरोध : ओलीको सूचीमा नपरेकी उषाकला यसरी बनिन्
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा यी ५७ जना निर्विरोध निर्वाचित [ सूचिसहित ]
यति धेरै संख्यामा खुल्यो सरकारी जागिर [ विज्ञापनसहित ]
चर्चित नेता लालबाबु पण्डितले अचानक लिएको निर्णयले एमालेजन स्तब्ध
भीम रावलले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै छन् ?
एमाले महाधिवेशनमा मनोनय गर्ने उम्मेदवारीको सूची प्रकाशित [सूचीसहित]
एमाले नेतृत्वबाट चार जना नेता बाहिरिए
लालबाबु पण्डितद्धारा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकारको घोषणा